Iminyhadala ezayo-Ihlabathi ngo-Matshi
Ungabhuka ngoku incwadi yematshi yesibini yehlabathi
Ileta yehlabathi ngaphandle kobundlobongela
Usuku lokungabi nonyango
Intlanganiso kwiintlobo zoqhagamshelwano
IiForam kunye neenkomfa
Ezantsi 中文 🤖
Akukho ziganeko zizayo.
Ukukhangela ukukhangela kunye nokujonga kwezehlo
Ngenisa igama eliphambili. Khangela Iziganeko zegama eliphambili.
Ukuhamba kweembono zeMicimbi
Iziganeko ezidlulileyo ezidlulileyo
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 8:12-22: 00 CET
Ukuvala imisebenzi ye-2 ye-Matshi eMadrid-8 kweyoKwindla 2020
EMadrid, eSpain	Madrid
Ngentsimbi ye-12 nge-Km 0: uphawu lokuvalwa kukhenketho lwehlabathi le-2 kaMatshi kwiinyanga ezi-5 emva kokumka kuloo ndawo. Ngo-12: 30 pm uPuerta del Sol kwindawo ephambi kweMallorcan: Ukuphawuleka komqondiso woluntu woxolo kunye nokungahambelani nabasetyhini beenkcubeko ezahlukeneyo.
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 8:08-23: 30 CET
IZIBHENGO ZOTHANDO NOBUCHULE, I-Coruña
# lola.saavedra.pintora #amarchacoruna #WorldMarch Umculi weplastiki waseCoruña uLola Saavedra usebenzisana nobugcisa bakhe "I-2nd ka-Matshi yeHlabathi loXolo kunye nokuNgenzi nto" esenza imisebenzi ebonakalisa iinqobo zoxolo, uzinzo kunye nokungahambelani. Ungayonwabela imisebenzi yakhe eboniswe kwigalari "SPAZO" de kube sekupheleni kukaJanuwari 2020 eAvda.
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 7:18-22: 00 CET
Ukuvalwa kwehlabathi le-2 kaMatshi- iMadrid (Casa Árabe) - Matshi 7, 2020
Indlu yaseArabhu, eMadrid	UCalle de Alcalá, 62, eMadrid
Ngo 18.30pm Umsitho wokuvala kaMatshi ngokuqanjwa kwemifanekiso yendlela, iindlela zongenelelo ngabahikisi abavela kumazwekazi awahlukeneyo, amazwi okuvala kunye nokuchukumisa umculo. Indawo: I-Auditorium yeNdlu yeeArabhu eCalle de Alcalá, 62, 28009 Madrid http: //wc.casaarabe.es/
© 2020 Phuhliswa ngu 4P Ukuthengisa